::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather विदेशबाट ऋण ल्याउने प्रक्रियामा जुटे वैंकहरु:: Rojgar Manch ::
विदेशबाट ऋण ल्याउने प्रक्रियामा जुटे वैंकहरु
शुक्रवार, २०७४ चैत्र २९ गते ०४:३६
वाणिज्य बैंकहरु विदेशबाट ऋण ल्याउने प्रक्रियामा जुटेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन बाटो खोलेसँगै ति संस्थासँग बैंकहरुले छलफल अघि बढाएका छन्।
केही बैंकले ऋणका लागि सहमति गरिसकेका छन्। एनआइसी एसिया र एनएमबि बैंकले ऋणका लागि आइएफसी ९इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन० सँग सम्झौता गरिसकेका छन्।
आइएफसी विश्व बैंक ग्रुपअन्तर्गत पर्दछ। नेपालसहित १ सय बढी देशहरुमा आइएफसीले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी तथा वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य गर्दै आएको छ। विभिन्न निजी क्षेत्रका उद्योगहरुले समेत आइएफसीबाट ऋण लिँदै आएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले यी दुई बैंकहरुले ऋण ल्याउनका लागि ऋणदातासँग सहमति गरेको जानकारी दिए। ‘यी बैंकहरुले ऋण ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेका छन्’ सिवाकोटीले भने ‘हामीले प्रस्ताव अध्ययन गरेर अनुमति दिन्छौँ।’
बैंकहरुले ऋण ल्याउन थालेपछि त्यसले तरलतामा सहजता ल्याउने राष्ट्र बैंकको भनाई छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण ल्याउन पाउने छन्। यसअनुसार आफूहरुले ऋणदातासँग सहमति गरी प्रक्रिया अघि बढाएको एनआइसी एसियाका असिस्टेन्ट सिइओ सुधीर पाण्डेले जानकारी दिए।
‘लाइबर दरमा ३ प्रतिशत बढी व्याजदर नपर्नेगरी हामीले आइएफसीसँग सहमति गरेका छौँ’ उनले भने ‘तीन वर्षे अवधिका लागि यस्तो ऋण ल्याउने छौँ।’
हाल ६ महिनाको लाइबर दर २ दशमलव ४७ प्रतिशत छ। पाण्डेका अनुसार यस्तो ऋणको व्याजदर करिब साढे ५ प्रतिशतको आसपासमा पर्दछ।
५ वर्षे अवधिसम्मका लागि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउन पाइने व्यवस्था छ। यद्यपी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिपछि यो अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था छ। उनका अनुसार बैंकले साढे २ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनेछ। यो बैंकले लिन सक्ने पूर्ण क्षमताको ऋण हो।
सानिमा बैंकले पनि आइएफसीसँग ऋणका लागि कुराकानी भइरहेको जनाएको छ। सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले आइएफसीसँग ऋण ल्याउने विषयमा सकारात्मक रुपमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
‘आइएफसीसँग छलफल भइरहेको छ, यदी अरु वित्तीय संस्थाहरुबाट पनि हामीले ऋण ल्याउन कुराकानी गर्ने तयारीमा छौँ’ दाहालले भने।
ऋणबाट स्वदेशमा थप पुँजी सिर्जना हुने र यसले विकासको गतिलाई टेवा दिने उनले बताए। अहिलेको रकम त्यति ठूलो नभएको बताउँदै उनले ऋण रकमको परिचालन र त्यसको उपलव्धी हेरेर आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले यो रकमको सीमा बढाउने विश्वास व्यक्त गरे।
यीबाहेक अन्य बैंकहरुले पनि विदेशस्थित विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुसँग छलफल चलाइरहेको जनाएका छन्। सानिमासहित अन्य बैंकहरुले पनि आइएफसीसँग ऋणका लागि प्रस्ताव गरेका छन्।
हालको अवस्थामा २८ वटै वाणिज्य बैंकहरुले विदेशबाट ८० अर्ब रुपैयाँसम्मको ऋण ल्याउन सक्नेछन्। सबै बैंकहरुको तोकिएको चुक्ता पुँजी पुगी नसकेकाले आगामी दिनमा यो रकम अझ बढ्न जानेछ।
बैंकहरुले ल्याएको ऋण रकम जथाभावी परिचालन गर्न भने पाइने छैन। जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केबलकार, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधारका साथै पर्यटन, कृषि र लघुवित्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सक्ने छन्।
घरजग्गा तथा रियलस्टेटका क्षेत्रमा भने यो रकम परिचालन गर्न बन्देज गरिएको छ।
401. एनसेलले ल्यायो ‘डे भ्वाइस प्याक योजना ८ रुपैयाँमा ३० मिनेट टक टाइम
402. ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्लोबल स्मार्ट सेवा अब आईओएस भर्सनमा
403. सेञ्चुरी बैंकले सुरु गर्‍यो भिसा क्रेडिट कार्ड सेवा
404. हिरोको पैसाको वर्षा योजना
405. सिटी एक्सप्रेसको ब्रान्ड एम्बेसेडर धुर्मुस–सुन्तली
406. प्रभु बैंक र नेपाल सर्टिफाइङ्ग कम्पनीबीच विद्युतीय हस्ताक्षर सम्बन्धी सम्झौता
407. रेमिट्यान्स घट्दा अर्थतन्त्रमा असर पुग्ने विश्व बैंकको चेतावनी
408. लगानी बोर्डको सीईओका लागि अधिकारी, पन्त र कोइरालाको नाम सिफारिस
409. एनसेलले ल्यायो ‘नाईट एसएमएस प्याक’
410. गभर्नर नेपालले हस्ताक्षर गरेको सयको नोट बजारमा
411. मनिग्राम र आईपे रिलायबलबीच सहकार्य
412. आईएमई १६ औं वर्षमा
413. कतारका रेमिट्यान्स कम्पनीको गुनासो-'जान्ने बुझ्नेबाटै अवैधानिक च्यानल प्रयोग'
414. कुमारी बैंकको नयाँ शाखा नीजगढमा
415. काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकले पश्चिमाञ्चल फाइनान्स ‘एक्वायर’ गर्ने
416. लोडसेडिङ घटयो, मंगलबारदेखि ९ घण्टा बत्ति जाने(नयाँ तालिकासहित)
417. आजबाट वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बिक्रि खुल्ला
418. शाखा विस्तार गर्दै एभरेस्ट बैंक
419. बैंक अफ काठमाण्डूले आफना शेयरधनीलाई २७ प्रतिशत बोनश शेयर दिने
420. बजेटमा बैंकिङ क्षेत्र : बैधानिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स कारोवार गर्न प्रोत्साहन
421. सक्षम र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकंको सहकार्यमा कालिकोटमा वित्तिय सेवा विस्तार
422. धुर्मुस सुन्तलीको पुनर्निर्माण अभियानमा सिटी एक्सप्रेसद्धारा साढे १५ लाख सहयोग
423. एनसेलको अनलिमिटेड डेटा रोमिङ प्याक आयो
424. सनराइजको नयाँ शाखारहित सेवा मोरङको डाँगीहाटमा
425. आजदेखि घट्यो लोडसेडिङ (तालिकासहित)
Results 841: You are at page 17 of 34